» मध्यरातमा यसरी बिहे गरेर लगे कल्पनालाई;बेहुली बन्दा लाजले भुतुकै ! को हुन कल्पनाका बेहुला ?(भिडियो सहित) मध्यरातमा यसरी बिहे गरेर लगे कल्पनालाई;बेहुली बन्दा लाजले भुतुकै ! को हुन कल्पनाका बेहुला ?(भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
मध्यरातमा यसरी बिहे गरेर लगे कल्पनालाई;बेहुली बन्दा लाजले भुतुकै ! को हुन कल्पनाका बेहुला ?(भिडियो सहित)
admin 505 Views
केही दिनअघि अगाडि चर्चीत दोहोरी कार्यक्रम इन्द्रेणीमा दोहोरी गाएर रातारात चर्चा बटुलेकी गायिका कल्पना दाहाल पछिल्लो समय अझ बढी चर्चामा छिन । प्रखर वक्ता रमेश प्रसाईं संग नाम जोडिएपछी अझ बढी चर्चा कमाएकी कल्पनाका अहिले गीतहरू निकै नै भाइरल भइरहेका छ्न ।
इन्द्रेणीमा गाएको दोहोरी भा”इरल बनेपछि गायिका कल्पना दाहालको चर्चा चुलिए”सँगै रमेश प्रसाईंसँग नाम जोडेर वि”वाहका अने”कथरि शि”र्षकमा समाचार र भि”डियोहरु बाहिरिएका थिए । तर यता रमेश प्रसाईले आफ्नी प्रेमिका नन्दा सिंह संग विवाह गरे । नन्दा संग विवाह बन्धनमा बाँधिने हल्लासंगै रमेश लाई धेरै दर्शक स्रोताहरुले केही आलोचना पनि गरेका थिए । रमेशको विवाह कल्पना संगै हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । तर विवाह पश्चात् उनीहरूको जोडीलाई भने यतिखेर धेरै नेपाली जनताले निकै नै मन पराइरहेका छ्न ।
तर यता कल्पना दाहाको भने विवाह एउटा भिडियो सामाजिक संजालम निकै नै भाइरल भएको थियो । त्यो थियो उनेको विवाह को । क्षणभरमै दशौं लाख भ्युज कामाइसकेको उक्त भिडियोमा उनी विवाह मण्डबमा बेहुलीको भुमिका मा सजिएकी थिइन ।
कल्पनाले पुस महिनामै रातारात बिहे गरेकी हुन।उनले राति बिहे गरेकी हुन् बिहेमा सामेल हुन पुगेका विवाहको समयमा चर्चीत गायक राजु परियारले अर्को मंसिरमा सन्तान हेर्न पाउ भने पछि सबै मुर्छा परि परि हाँसेका थिए । यत यो त सबै कुरा सुटिङमा सिमित थियो । आफ्नो म्युजिक भिडियोको अभिनयको लागि कल्पनाले यसो गरेकी हुन ।
कल्पना दाहाल,राजु परियार र पुरुषोत्तम पौडेलको आवाजमा रहेको गीतको सुटिङ्गको क्रममा कल्पना दाहाललाई बेहुली बनाईएको छ।गीतमा कल्पना दाहाल बेहुली छिन भने पुरुषोत्तम पौडेल बेहुला को भुमिकामा रहेका छन । यही पौष ४ गतेबाट उक्त गीत पुरुषोत्तम पौडेलको आधिकारिक युटुब च्यानल मार्फत आउने रहेको छ। उक्त गीतको सुटिङ भएको भिडियो अहिले युटुबमा ट्रेन्डिङमा छ । भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला